रमेशले कालिकोटकी नन्दालाई कहिले र कहाँ भेटेका थिए ? « osnepalnews
रमेशले कालिकोटकी नन्दालाई कहिले र कहाँ भेटेका थिए ?
बहुमुखी प्रतिभाका धनि स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई र उनका बालापनदेखिका साथी जीवन बिष्ट एकै मण्डबमा मङ्सिर २२ गते विवाह बन्धनमा बाधिएका छन । रमेशले कालिकोटकी नन्दासिंहसँग लगनगाठो कसेका हुन भने उनका सहयात्री साथी जीवन विष्टले तामाङकि छोरीसंग धुमधाम बिबाह गरेका छन । रमेशको बिबाहमा रबि लामिछाने देखि ज्ञानेन्द्र शाही सम्मका धेरैको उपस्थिति रहेको थियो ।
सायद रमेशलाई नचिन्ने त कम होलान् तर उनको जीवनी संगिनी बन्न लागेकी नन्दा को हुन् भन्ने कुराले सबैमा उत्सुकता जगाएको छ । रमेश प्रसाईको जस्तै उनको पनि धेरै संघर्षको कथा रहेको छ। उनकी जिबन संगिनी नन्दाको र गायिका कल्पना दाहाल बीचमा अहिले धेरै दर्शकले चासो देखाएपछि रमेश प्रसाईले स्पस्ट रुपमा कल्पना संगको सम्बन्ध बारे बताएका थिए र भर्खरै बिबाह समेत सम्पन्न भएको छ ।
कल्पना संगको सम्बन्ध के थियो ? किन गरे नन्दा सङ भन्नेबारे सबैलाई थाहा भइसकेको छ । बिहेमा रमेशकि दिदी कल्पना र अन्य धेरै चेलीहरुले रिङ्केबुङ्गको रागोलाई भन्ने गितमा नाचेर तहल्का मच्चाएका छन ।
नाच्दै दोहोरी समेत गाएकी कल्पनाले दोहोरीमै आफ्नो मनको भावना पोखेकी छिन । एक्कासि रबि लामिछाने आउदा लजाएकी कल्पाना भावुक बन्दा भाग्य र भोजराजलाई सम्हाल्न मुस्कील परेको छ ।तलको भिडियोमा हेर्नुहोला चकित हुनुहुनेछ ।